Iindaba -Ilizwe lethu lokumboza ishishini sele lingene kwisiphelo sentengiso sokulwa idabi
Ishishini lethu lelizwe lokutyabeka sele lingene kwitheminali yokulwela idabi
Inzuzo yeyona njongo iphambili yenkampani yepeyinti, kodwa kule marike yepeyinti yokhuphiswano, unokuma njani? Oko kukuqonda uphuhliso lweshishini kunye nenqanaba langoku, wenze amanyathelo ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokulungiselela, ukuhlangabezana nemiceli mngeni emitsha, ukwandisa ukhuphiswano lwabo.
Amanye amashishini okugquma kwilizwe lethu angene kwidabi lesiphelo sentengiso
Njengoko ukhuphiswano lweemarike zokwaleka lukhulu ngakumbi, intengiso yenethiwekhi iyakhula kwaye iyatshintsha inzuzo, iarhente yephondo exhasa ishishini lokuqala ngamandla linokujika libe lelinye igosa lophawu lwentengiso nangaliphi na ixesha. Ke ngoko, amashishini amaninzi okutyabeka awajolisanga kuphela kwintengiso yenethiwekhi apha ngasentla, kodwa ukuyilwa kweqela lophuhliso, uphuhliso lwabathengi bekhaphethi yemveliso. Kulo nyaka amashishini eepeyinti ayenzeka ngokuhambelana kwimizamo yokuntywila kumjelo wokuntywila. Abathengisi abadlulayo, abajongana ngqo nabathengi, ngakumbi nangakumbi ngamashishini epeyinti eShandong ukuthatha isicwangciso sentengiso. Idabi lokugcina ipeyinti liyavela.
Ukuxhamla ngokuntywila kumjelo, umntu ophetheyo kumashishini amaninzi epeyinti wafikelela kwisivumelwano - angalinciphisa ngokufanelekileyo ikhonkco lokujikeleza, akhawulezise ingeniso yemali, naye anganika abathengi ithuba lokufumana inzuzo; Ingayenza buthathaka amandla entetho yabathengisi kwaye yomeleze ulawulo lwentengiso lwamashishini. Ukujongana namashishini epeyinti ngokuthe ngqo, inokucinezela indawo yokuhlala yepeyinti engeyiyo kunye nephantsi, ukuqhubela phambili ukumisela umgangatho kukhuphiswano lweemarike, ukugcina umdla obalulekileyo wamashishini epeyinti, kunye nokuseka nokwandisa ifuthe lophawu.
Imarike yepeyinti iya kuzisa umsinga wokupheliswa kweminyaka emi-3 ukuya kwemi-5
Icandelo lokumboza "ikhulu leentyatyambo liqhakaza", uhlala esithi kukho amashishini angamawaka asibhozo, ngaphezulu kwamawaka alishumi eemveliso. Ngokwembono yegophe lophuhliso, ixesha lokuphuhliswa kwegolide loshishini lokutyabeka lidlulile. Ukunyuka kweendleko, izixhobo ezisemva, ukhuphiswano olomeleleyo lwentengiso kunye nezinye izinto zikhokelele ekuvalweni kweenkampani ezininzi zeepeyinti kunye nabasasazi bazo. Nangona kungenakwenzeka ukujonga ngokuchanekileyo ukuba zingaphi iinkampani zokwaleka kunye neempawu ezikhoyo, kodwa ngokuqinisekileyo ukuba inqanaba lokupheliswa kwemizi-mveliso yokutyabeka sele liqalisile.
Ijelo lokuthengisa lenkampani yokutyabeka liqala ekuqaleni kwenkulungwane yama-21 ukuza kuthi ga ngoku, bonisa imeko yokuthambisa ngalo lonke ixesha, umenzi uhlengahlengisa ngokungagungqiyo kumthengisi wephondo kunye nomthengisi wenqanaba lesixeko kunye nokunciphisa indawo yentengiso, zama ukuphuhlisa inethiwekhi ngakumbi, phuhlisa umthengisi ngakumbi ukuze asebenzisane ngqo nenkampani. Kwiivenkile zokugcina, imo yeevenkile ezikhethekileyo kunye neevenkile ezinkulu zikhona, ngelixa ukusebenza kwevenkile / kwivenkile ezincinci kunzima. Abanye abavelisi baqala ukukhuthaza iivenkile ezintsha, ukuzama ukuphucula ukhuphiswano lwabathengisi kunye neempawu kwisiphelo. Ulawulo lwabathengisi kunye nokwazisa ngeendleko kwaqala ukomeleza ngokuthe ngcembe, ukuthembela kumandla abavelisi, ukuphucula amanqanaba abo okunyusa kunye nezakhono zokuthengisa, ukulungiselela ukukhula komhlaba ngakumbi.